လာပြန်ပြီ ဒီတခါတော့ ရေသန့် ဗူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » လာပြန်ပြီ ဒီတခါတော့ ရေသန့် ဗူး
လာပြန်ပြီ ဒီတခါတော့ ရေသန့် ဗူး
Posted by etone on Nov 24, 2011 in Myanma News, Photography | 41 comments
မင်္ဂလာဒုံနေအိမ်တစ်ခုဧ။် သောက်တော်ရေတွင်းမှ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ပေါ်လာသည့် အဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက် …ဒီနေ့ နေ့လည် ထမင်းစားချိန်မှာ စက်ရုံထဲမှ ကလေးများ အုန်းအုန်းကြွတ်ကြွတ်ပြေးလွှားကာ ဘုရားပုံပေါ်သည်ဟု အလုယှက်ရေဗူးလေးများကို နေရောင်တွင်ထောင်ကာ ကြည့်နေကြတယ် ။ ကျွန်မလည်း မယုံတ၀က်ယုံတစ်ဝက်နဲ့ လိုက်လုပ်ကြည့်တော့မှ … အလင်းပြန်တဲ့အရိပ်ကနေ ဘုရားပုံသဏ္ဍန်ဖြစ်နေတာ အံ့သြစွာတွေ့ ရပါတယ် ။ လူတိုင်း ရေဗူးတိုင်းတွင် ပေါ်သည်မဟုတ်ပဲ လူတစ်ချို့ဧ။် ရေဗူးတွင်းရေအပြည့်ထည့်ကာ စမ်းသပ်မှုတွင်မှ ပေါ်တယ်လို့ သိရပါတယ် ။ အလင်းပြန်လို့ပုံသဏ္ဍန်တူခြင်းလား ၊ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပဲလားကတော့ … မဝေခွဲတတ်အောင်ပါပဲ … ။ ပုံရိပ်ပေါ်တာ အမှန်ဖြစ်ပေမယ့် …. စိတ်ထဲမှာတော့ လက်မခံချင်သလိုချည်းလည်း ဖြစ်နေသေးလို့ … ရွာသူရွာသားတွေဆီက စကားသံကြားချင်တာကြောင့် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် … ။
နေရောင်မှာ ထောင်ပြီး စမ်းကြည့်တာ ...
နားလည်ရတော့ ခက်သားပဲ .. ။
ကျိုက်ထီးရိုးပုံတော်လိုလို ... ဘာလိုလို
မအိတုန် အဲဒါက ရေထဲကို နေထိုးလို.ပေါ်တဲ့ပုံရိပ်ထင်ပါတယ်.ဗျာ.. ဘာလို.လဲဆိုတော့ နေက ရေဗူး အပြည့်ရေထည့်ထားတော့ နေဖြတ်ဝင်လာတဲ့ နေရာက ရေဗူးရဲ. အတွန်.လေးတွေကနေ အဆင့်ဆင့်လေးတွေဖြစ်နေတာနေမှာပါ..
ရေဗူးတိုင်းမှာ မပေါ်တာကတော့ အဲဒီရေဘူးမှာ အတွန်မပါလို.ပါ.. ပြီးတော့ ရေအပြည့်မထည့်ထားလို.နေမှာပါ…
ဟုတ်တယ်လေ … အဲ့ဒါနေရောင်ကြောင့် အလင်းပြန်တဲ့ အရိပ်က ပေါ်နေတာပါ .. . တခြားပုံမပေါ်ပဲ ဘာလို့ …အဲ့လိုပုံ ခပ်ဆင်ဆင်ပေါ်သလဲဆိုတာတော့ .. နည်းနည်း စိတ်ဝင်စားလို့ …. ပုလင်းပေါင်းစုံနဲ့စမ်းလည်း ဒီပုံပဲ … ဟွန့်
ညဖက်လထွက်လာလျှင်လည်း ထိုလကို ကြည့်လိုက်ပါ။
ထူးခြားသည့် ပုံများ အမှန်တစ်ကယ် ပေါ်နေပါကြောင်း။ (မမြင်လိုက်ကြမှာ စိုးလို့ )
ဒါ့ပုံကြည့်လိုလျှင် အရှေ့ (တစ်) ကျွန်း ဒတ်ဆြာကြီး ဂီ လက်ရာတွင် အသေအချာ မြင်နိုင်ပါကြောင်း
( နရဲ တော့ ကြီးတော့မှာပဲ ဘွာတေး )
သည်ပုံလေးကတော့ဖြင့် .လကို တခြမ်းတည်း လိုက်တင်ခက်ခက်ခဲခဲပေးပီး ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပါ…
စိတ်ကြီးထှာ ကျွန်းပြန်ကြီး ကလည်း (ခုမပြန်သေးလဲ တစ်နေ့တော့ ပြန်မှာ)
တစ်ခါက ရွာမှာ လမှာ ဘာပေါ်တယ်ဆိုပြီး ရှိဖူးတယ်လေ။
ခုပြန်ကြည့် ရအောင် သူ့ ကြော်ငြာပေးတာများ
ဖေ့ဘွတ်မှာတော့ ပလူပျံကို စုံနေတာပဲ.. သူငယ်ချင်းက စောစောက ဂျီတော့မှာ လာပြောတယ် ဘာမှန်းတော့ သေချာ မသိဘူး အင်း လို့သာ ပြောလိုက်တာ.. အခု ပုံတွေ မြင်မှ သူပြောတာ နားလည်တော့တယ်။
လူတွေ….လူတွေ … ရယ်ရတယ်နော် … ။ ဟိုဖန်ခွက်ထဲပေါ်တာကတော့ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမို့ … အခုလည်း ရေသန့်ဗူးပုံပေါ်တယ်ဖြစ်နေကြပြန်ရော .. ဟီးဟီး …
Etone က ဘယ်က ရလာတဲ့ သတင်းလဲတော့ မသိပါဘူး။
အဲဒါက မန်းသားတွေ ပိုသိလိမ့်မယ်ဗျာ။
မန်းလေးမှာ မြကျောက်ရေသန့်ဆိုတာ ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
သဘာဝရေသန့်နော်။ ခင်ဗျားတို့ ချာတိတ်တွေလည်းကြားချင်ကြားဘူးမှာပါ။
အဲဒီတုန်းကတည်းက မြကျောက်ရေသန့်ကို နေတည့်တည့်ထောင်ကြည့်ရင်
စေတီတော်ပုံအရိပ်ပေါ်တယ်ဆိုလို့ လုပ်ကြည့်တာ ဟုတ်တယ်ဗျာ။
အဲဒါနဲ့ ရန်ကုန်ရောက်တော့ တခြားရေသန့်ပုလင်းကိုရေထည့်ပြီးနေမှာ ထောင်ကြည့်မိတယ်။
အဲဒီတော့ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်လောက်ကို ပြန်မသွားကြပါနဲ့တော့ဗျာ။
အဲဒါကြီးကကြာခဲ့ပါပြီ။ နောက်ဆုံးပေါ်လေးတွေ လုပ်ကြရအောင်ဗျာ။
ဟော အခုပဲဖုန်းဝင်လာပါတယ်ဗျာ။ ရေသန့်ပုလင်းကိုထောင်ကြည့်ရင်
စွယ်တော်ပေါ်တယ်တဲ့။ ဟုတ်မဟုတ် လုပ်ကြည့်လိုက်ကြဦးဗျို့။
အဟမ်း ….(ဆြာချောဆီက ကူးတာ..)
ရေသန့်ကိစ္စ …အင်း …
အဲ့ဒါ Branding through religion လုပ်တာဆိုရင်တော့
ခုမှ ပြူးတူးပြဲတဲတွေ ဖြစ်နေတာ local က marketer တွေ
ဖွတာ ညှော်တိုက်တာ မဖြစ်ပါစေနဲ့ ကွယ်တို့ (ဘဖော လေသံဖြင့်)
ဂလောက်ဖြစ်နေဂျဒါ ဘုရားစင်ပေါ် ရေသန့်ဘူးတွေပဲ နိုင်သလောက်တင်ပီး
ကုန်း ကုန်းပီး ဦးချကြပေရော့။ (အော်ရီချင်ဒယ် မီးကျိုးမောင်းပျက်သံဖြင့်)
ဒီလိုဘဲ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး လူတွေကို အုံးစား ခိုင်းတာ ခဏ ခဏ ။ ဆငိးတုတော် တွေ ဗိုက်ကြီး ဖောင်းလာတယ်တို့။ လက်ဖျားထိပ်က ရေစက်ချ တယ်တို့။ ရောင်ချည် လွှတ်တယ်တို့နဲ့ ။
လူတွေက်ို အုံးစားခိုင်းထားတာ ။ ယုံ ချင်တဲ့သူ ယုံ ။ ဒို့ကတော့ ယုံ ဘူးးးးးးးးးးးးး
ကျွန်မတို့ရုံးနားမှာလည်းေ၇သံပုလင်းကို ထောင်ထောင်ပြီး ကြည်နေကြတာကိုတော့ တွေ့မိတယ်… လက်စသတ်တော့ ဂလိုကြောင်းကို..
ကဲ… နေရောင်ခြည်တန်းက refraction သဘောအရ အလင်းဖြာတာ စုတာ နဲ့ ဒီဘက်အခြမ်းက မြင်ရတာကို တတိုင်းပြည်လုံး အုံးအုံးကျွက်ကျွက်လုပ်နေရင် အခြားပြည်က ပညာရှင်များက ရှင်းပြပြီး တမျိုးသားလုံးကို ရယ်လိမ့်မပေါ့ကွယ်တို့။
နောက်တစ်ခုက …. ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်… ဟုတ်ကဲ့… ဘာသာတရားရဲ့ အနှစ်သာရအစစ်က တရားရကြဖို့ပါပဲ။ ဘုရား…တရား…သံဃာ ကိုးကွယ်ပြီး စွယ်တော်သွားဖူးပြီး ကြည်ညိုမိလွန်းလို့ တရားအားထုတ်တာ၊ မောဟနည်းသွားတာ၊ လူဘယ်လောက်ရှိနိုင်သလဲ။ ရေသန့်ဘူးမှာပေါ်တော့ ဘာဖြစ်သတုန်း… တရားမရတဲ့ မောဟ အမှောင်ဖုံးနေတုန်း ဆိုရင်တော့ ကုသိုလ်စိတ်က နည်းနေမှာပဲလေ။
စိတ်ပျက်လိုက်ထှာ ….။ ကိုယ့်ဖာသာစာလေး ရေးမယ်ဆိုပြီးလိုင်းပေါ်တက်လာတယ်…။ ဘာတွေမှန်းကိုမသိဘူး လာ လာတွေ့နေရတာ….။ တုန်တုန်ရေ.. အဲဒိလိုလေးလည်း သေချာဆန်းစစ် ကြည့်ဦးဟ…။ လေဓီရိုထဲတောင် ပါဆိုပဲ…။ အုံးနောက်မရယှိတဲ့ဟာဒွေ…။
ဟီးဟီး သဂျီးတော့ စိတ်ညစ်နေပြီ … အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် … ငါးပွိုင့်ဆီလာလာပေးကြလို့ပါ … ဟီး … ။
ပေါ်တာတွေ ကတော့ အချိန်ကိုက်တွေပဲ..
စွယ်တော်ကြွလာပေမဲ့ တချို့တွေ က လည်း..ဘာဘာ ညာ ညာ အစုံတွေးပြီး မသွား ကြသေးတော့..
ဟိုဘက်ကို ပြန်ကြွသွား ရမဲ့ စွယ်တော် မြတ်အလှူငွေ အရနည်းမှာ ကို တချို့တွေက တော့ အတော်စိုးရိမ်တယ်ထင်တယ်..
ရပ်ကွက် တခုကို နှစ်သိန်း လှူရမယ်ဆိုတာလဲ အမိန့်တော် ရှိထားသလားလို့..
ဒီလိုဆော်သြကြပုံတွေ တော့လုပ်ပေါင်းလဲ များနေလို့ …
မန်းတလေးမှာလဲ ၊ ဒီကနေ့ နေ့ လည် ၁၂ နာရီလောက် ၊ ဖုန်းတွေ ဆက်လာလို့ 
ရေသန့် ဘူး တစ်ဘူး ပြေးဝယ်ပြီး ၊ နေရောင်ရှိတဲ့နေရာမှာ ထောင်ကြည့်တယ် ၊ လှဲကြည့်တယ် ။
ကျုပ် လုပ်ကြည့်တော့ ဘာမှ မမြင်ရပါဘူးကွယ် ။
တမြို့ လုံးဒီမှာလဲ အုံးအုံးကျက်ကျက်ပါ မေပေါင်ရေ။ခက်တော့လဲ ခက်သားဗျ။ကျွန်တော့်တို့ ရဲ့ မဆင်မခြင်
တွေးခေါ်ပုံတွေကို သူများတွေကရယ်စရာဖြစ်နေလိမ့်မယ်။အလင်းပြန်ခြင်းသက်သက်မို့ ဘာမှမဟုတ်တန်ရာပါဘူး။
ကျုပ်လည်း ဒီနေ့ မနက် ၀ရံတာမှာ ထွက်ရက်ရင်း…
လူထီး လူမတွေ ရေသန့် ဘူးလေးတွေ တထောင်ထောင်နဲ့ဘာပါလိမ့်ပေါ့…..
လမ်းသွားရင်း ဖြတ်သွားတဲ့ အသိက လှမ်းပြောလိုက်လို့ကျုပ်လည်း သိချင်စိတ်နဲ့ 
ကျုပ် ကုတင်ဘေး အဆင်သင့် ရှိနေတဲ့ ရေသန့် ဘူးကြီးကို နေရောင်ထဲ ထောင်ကြည့်လိုက်တော့…..
လားလား…….အမြုတ် တစီစီနဲ့အနယ်အနှစ်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ မနေ့ ညက မူးမူးနဲ့ပေါက်ထည့်
ထားတဲ့ သေးဘူးကြီးပဲ …….
ဒီလူကြီးကတော့ နောက်တီးနောက်တောက်နဲ့ …. ရှင့်ကော့မန့်ကိုဖတ်ပြီး ခွက်ထိုးခွက်လန်ပဲ ရယ်မိပါတော့တယ် … ဒါနဲ့ … ဟိုပုလင်းကို ဘီယာပုလင်းနဲ့မှားမသောက်မိစေနဲ့နော် ဟီးဟီး … ။
ဒို့မြန်မာတွေ ဒီလိုမျိုး မြင်မြင်ရာကို လိုက်ကိုးကွယ်နေကြပုံမျိုးနဲ့တော့ အတော်လေးတုန်းတဲ့ လူမျိုးလို့ သူတစ်ကာတွေ ၀ိုင်းဟားတာ ခံရတော့မှာပဲ..
လုပ်မယ့်လုပ် ဒီလိုလုပ်ကြ .. လုပ်နည်းပါပြောပြမယ်
(၄) ဘုရားပုံကို2layers လုပ်
(၅) ဘုရားပုံ layer တစ်ခုကို overlay ထား၊ တစ်ခုကို soft light ထား
(၆) ၃ ပုံထပ်လိုက်
(၇) flatten image လုပ်လိုက်
ရပြီ ….း(
Credit to ဆြာ ဇော်ကန့်လန့်..
အဲဒါကြောင့် ကျုပ်ကပဲ.. ၀ါသနာပါသူတွေကိုးကွယ်လို့ရအောင် လုပ်ပေးလိုက်တယ်…။
မိုက်လှချည်လား သူကြီးရ…သူကြီးက ဒါမျိုးလည်းရတာပဲနော်…ဟိဟိ… ဒါပေမယ့် ပိုင်ရှင်ရဲ့လက်ကို ခွင့်ပြုချက်မရဘဲယူသုံးထားတယ်…မီးတို့နိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရနေပြီ ဒါမျိုးလာမလုပ်နဲ့… နောက်တစ်ခါသုံးရင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းပါ…
သဂျီးလည်း မျက်နှာအတော်ပြောင်ပါလား … ဟား ဟား
ဖေ့စ်ဘွခ်ကနေ … ဘုရားပုံပေါ်ခြင်းဆိုပြီး … ဖွလိုက်ရလျှင်တော့… ဟား ဟား …
ဖုန်းသတင်းလေးကြားလို့ ကြည့်မိလိုက်တယ်။ ဟုတ်သလိုလို ။ ငရဲကျမှာလဲစိုးတယ်။ ဒိဌိ လို့ အပြောခံရမှာ ကြောက်လို့ ဘာမှ မပြောတော့ဘူး။ ဒါမှ ပိုပြီး ဆိုးသွားမလားမသိဘူးနော်။
ခင်ဗျားတို့ ရေသန့်ဗူးလုပ်တာနဲ့ သူကြီးက ပိုစ်တပုဒ်ရသွားပြီ။
ကျုပ်ကတော့ မြန်မာပြည်ကြီး ဒီလိုဖြစ်ရတာ.. ဘာကြောင့်လည်း ထပ်ခါတွေးနေမိတော့တာပဲ..။
ဒါတွေဟာ.. စံနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဖူး…နိုင်ငံရေး စံနစ်ကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး…။
“Every nation has the government it deserves.” (“Toute nationale gouvernement qu’elle mérite.”) Joseph de Maistre (1753-1821)
စနစ်ကြောင့် မဟုတ်လို့ ဘဇာကြောင့် တပ်အပ်ပြောနိုင်သနည်း။။ လူတွေခမျာ စနစ်ကြောင့် ထွက်ပေါက်ပိတ်ပြီး ဖြစ်ချင်ဇောကြီးတယ်လို့ တွေးယူရင်ကော မရဘူးလား။ ဒါမှမဟုတ် စစ်တပ်ဒလျှိုတွေက နိုင်ငံရေးအချိန်အခါနဲ့ ကိုက်ပြီး သံမဒဂျီးကို ဂုဏ်တင်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အန်အယ်ဒီနဲ့ ပြည်တွင်းသူပုန်တွေကို ချုပ်ထားနိုင်ချိန်၊ အာဆီယံ ငှက်ကထဖြစ်ချိန်မှာ စွယ်တော်ပင့်တယ်၊ ဆင်ဖြူတော် ပေါ်တယ်၊ ပုံသတင်းတွေဖြစ်တယ်။ သဂျီးတောင် ကမ္ဘာကြီးမှာ ဘာဖြစ်ဖြစ် စီအိုင်အေလက်ချက် မကင်းထင်ရင် မြန်မာပြည်မှာ စစ်တပ်ကြောင့်လို့ ကောက်ချက်ချတာ လွန်တယ်ပြောမလား ကျနော်ထင်တာတော့ သမ္မာဒေဝနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေက လူတွေကို တရားစောင့်ဖို့ အချက်ပေးနေတာ။ ရေသန့်ဗူးမှာပေါ်တော့ မလိုက်နာသူတွေ ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိထားရမယ်။ ဆောင်းတွင်းကြီး ကမ်းခြေသွား ရေမကူးနဲ့လို့ သဂျီးကိုမှာချင်တယ်။။။။။
သြ ..ပေါ်တွားဘီ ဆိုတော့လည်း ၀န်ခံရဒါပ…
ဟုတ်လယ်ဟေ့ အဲ့လာ ငါလုပ်တာ ငါလုပ်တာ …
စက်ဒဂျပ် စစ်ဆင်ရေးကွ …တေတွားမယ် ဘာအောက်မေ့လဲ…
တင်တန်းအူး ကြွဝါးလို့ ဒီတခါ နာကိုယ်တိုင်လုပ်တာ …
တိမ်မှာပေါ်တာတို ဘာတို့ ကတော့ ကြားဖူးတယ်
ပြီးတော့ ရင်ငြိမ်းကြုံဖူးတာတခုကတော့ တောင်ကြီးက ရပ်ကွက်တခုမှာ
ဂေါ်လခါးသီးက နွယ်တွေ ပတ်ရင်း ပတ်ရင်း ဘုရားပုံဖြစ်သွားတာတို့ကိတော့ ကြုံဖူးတယ်
သေချာတာတခုကတော့ ရေသန့်သမားတွေ ထောပြီ
I didn’t see anything lah. Only I saw green color and some shade. Something wrong.
အချွန်လေးမို့လို့ ဘုရားနဲ့တူလို့ဆိုပြိး ပြူးပြူးပျာပျာဖြစ်စရာလား ?
တကယ်ဆိုကိုယ့်လက်နဲ့ ဘောပင်သုံးပြီးဆွဲရင် ပိုတူနိုင်တာပေါ့
ကိုယ် ကိုယ်တိုင် ပုံဆွဲပြီး ကိုးကွယ်ကြဘို့ကောင်းတယ်။
ကျုပ်ဆို တောင်ခြစ်မြောက်ခြစ်လုပ်ရင်း အချွန်ပုံဆွဲမိသွားတာ ခဏခဏ
အင်းပေါ့လေ – အ၀ိုင်းတွေ လေးဒေါင့်တွေ ရောပေါ့ ….။
ကျုပ်သာ ပြင်သစ်လူမျိုးဆိုရင် အခုတွေ့နေရတာတွေဟာ ဘုရားစေတီပုံမဟုတ်ဘူး အီဖယ်တာဝါပုံလို့ လိုက်ငြင်းချင်လိုက်တာ။
အဲဒီထက်ထူးတဲ့ သတင်းရှိတယ်ဗျ အရက်ပုလင်းတစ်လုံးကို မှန်ရှေ့မှာ ထောင်ကြည့်တာ အရက်သမားပုံ ပေါ်လာတယ်တဲ့ မယုံရင်လုပ်ကြည့်လိုက်ကြ
အရက်မူးမူးနဲ့ …အဲ့ဒီပုလင်းကြီး မော့သောက်မိတာရော မပါဘူးလားဗျို့ … ။ ပြီးမှ ပုလင်းမှားသွားတယ် …ကဏန်းကြီး ဆဲဗန်းဆဲဗန်းပြောတဲ့ပုလင်းနဲ့ဆိုတာလေ …
အလင်းသဘောတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တာ ကို နားမလည်တဲ့ တချို့ လူတွေကတော့ထားပါဦး အစိုးရသတင်းစာ ကပါ ဖော်ပြနေတာ ကတော့ အံ့ ရော
ရော။ တောင်ပေါ်သားကတော့ မနေတတ် မထိုင်တတ် မပြောတတ် မဆိုတတ်